ओलीलाई रमेशजङ्ग रायमाझीको प्रश्न- बालुवाटारमा ‘रअ’का प्रमुखलाई कसले भित्र्यायो ? « News24 : Premium News Channel
ओलीलाई रमेशजङ्ग रायमाझीको प्रश्न- बालुवाटारमा ‘रअ’का प्रमुखलाई कसले भित्र्यायो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारीका बालुवाटारमा रातारात भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई कसले भित्र्यायो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै उहाँले ‘रअ’का प्रमुखलाई रातारात बालुवाटारमा भित्र्याएपछि नै तत्कालीन सरकारले ‘चुच्चे नक्शा’ लुकाएको आरोप लगाउनुभो ।
सांसद रायमाझीले ओली भ्रष्टाचारीका राजनेता भएको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद विघटन गरेर संसद समाप्त गर्ने महानायक, भ्रष्टाचारका महानायकले त्यो कदम चालेपछि सांसदहरु बाध्य हुनुभयो नयाँ सरकार बनाउन । यो अवस्था कसले ल्यायो ? हामीले ल्याएको हो ? भ्रष्टाचारका महानायक, भ्रष्टाचारी राजनेता भन्नुस् म स्वीकार्न तयार हुन्छु । भ्रष्टाचारीलाई राजनेता भन्ने ?’
ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको औषधि खरिदको अनियमितताबारे छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ओली सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो । कोरोना औषधिमा समेत ओली सरकारले अरबौं भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।’
रायमाझीले दुई तिहाई बहुमतको नजिक पुगेर पनि सरकार चलाउन किन नसकेको भनेर प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि सुटुक्क प्रचण्डलाई बोलाएर ओलीले पार्टी एकता गरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘त्यो एकतालाई कायम राख्न नसक्ने, अनि अहिले काँग्रेसलाई दोष देखाउने ?’
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि शुक्रबार बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आज अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतलमा समसामयिक
माैसम बदली : हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना